Dhibaatada qabsata Dadka Madow ee Caruur Caddaan ah korsada - Idman news
Dhibaatada qabsata Dadka Madow ee Caruur Caddaan ah korsada
Dhibaatada qabsata dadka madow ee caruur caddaan ah korsata
Peter iyo wiilka uu korsaday ee Johnny
Dadka korsada caruur aan u midab eekayn waxa had iyo goor u badan qoysaska caddaanka ah ee korsada caruurta madow ama Aasiyaanka ah.
Laakiin marka ay arintu sidaa ka gedisan tahay ee qoys madow ah ama Aasiyaan ahi ay korsadaan caruur caddaan ah, waxa dhacda in booliska iyo bulshada caddaanka hi b aka shakiyaan dadkaas.
Wiil yar oo todoba jir ah oo la yidhaa Johnny oo caddaan ah, ayaa isaga oo subax la socda aabihiis korsaday ay arin la yaab lihi la kulan tahay. Iyaga oo ka qadaynaya makhaayad ku taal magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina, ayuun buu arkay Peter, oo aabihii ahi Johnny oo y caruur kale dagaalamayaan. Intuu deg deg u soo dhaqaaqay ayuu inankiisii uu korsaday gacanta u soo qabsaday ayuu degdeg u bixiyey lacagtii oo baxeen.
Markuu baabuurkiisii gaadhay ee ilmihii yaraa dhulka dhigay ee uu damcay inuu baabuurka dhaqaajiyo, ayaa haweenay ku soo dhaqaaqday iyadoo yaaban.
“wiilkan yar hooyadii meeday?” ayey waydiisay.
“Aabihii baan ahay” ayuu ugu jawaabay.
Haweenaydii baa intay dib u dhaqaaqday horjoogsatay gaadhigii Peter. Taarikada baabuurka intay hoos u eegtay ayey telefoonkii la soo baxday.
“Hello, booliiskii saw maahaa” ayay si degan u tidhi iyadoo telefoonka ku hadlaysa. “Nin madow ayaa halkan joogaa oo wiil yar oo caddaan ah afduubaya”.
Wiilkii yaraa ee Johnny ayaa naxdin la dhaqaaqi waayey, oo Peter kor u eegay. Peter ayaa isku duubay wiilka uu korsaday oo ku yidhi “dhib ma leh”.
Peter qudhiisu waayo adag oo nololeed ayuu soo maray. Wuxu dib jir ku ahaa dariiqyada magaalo madaxda Kampala ee Uganda.
Peter iyo wiil kale oo caddaan ah oo uu korsaday
Nin naxariis badan oo la odhan jiray Jacques Masiko ayaa ku arkay suuqa. Marka uu suuqa u soo doonto adeegiisa todobaadlaha ah ayaa inta aanu noqon cunto u iibin jiray Peter. Qiyaastii sannad ka dib ayaa Masilo weydiiyey Peter in uu doonayo inuu wax barto iyo in kale. Peter ayaa haa ugu jawaabay, markaas ayuu Masiko maalmo ka dib Iskuul ku daray.
Lix bilood ka dib, markuu arkay in Peter ku dadaalayo waxbarashda ayaa Jacques Masiko iyo qosykiisu wiilkii yaraa gurigeeda geeyeen si uu ula noolaado. Peter ayaa abaalkaa ku guday inuu tacliinta ku dadaalo waxaanu markii dambe ku guulaystay deeq waxbarasho oo uu ka helay Jaamacad Maraykan ah.
Tobanaan sano ka dib, ayaa Peter oo 40 jir ah wuxuu deganaansho ka helay dalka Maraykanka. Wuxuu u shaqaynayey hay’ad maxali ah oo khayri ah oo deeqaha gaadhsiisa bulshada saboolka ah ee Uganda. Isaga oo maalin socda ayuu arkay qoys caddaan ah oo gabadh yar oo ay korsadeen wata. Waana markaas kolka ay Peter ku soo dhacday in caruurta Maraykanka ku nool ee saboolka ah qudhoodu u baahanyihiin cid daryeesha sida kuwa Afrika oo kale.
Mark uu ka soo noqday safar uu ku tagay Uganda oo ayaa markuu ku soo noqday North Carolina, Peter u tagay wakaaladda caruurta la korsado dadka u sharciyeysa oo uu u sheegay inuu diyaar u yahay in uu kafaalo qaado ilmo uu korsado.
“Ma ka fiirsatay in aad noqoto waalid Imo aanu dhalin korsada” ayay weydiisay gabadhkii xafiiska ka shaqaynaysay oo hadana weydiisay in uu macmuulmaadkiisa oo dhan bixiyo.
“Xaas ma lihi” ayuu ku jawaabay Peter.
Markii uu saxeexay waraaqihii looga baahnaa, Peter wuxuu filayey in ilmaha lagu wareejin doonaa noqon doono mid ay isku midab yihiin oo Maraykanka madow ah. Laakiin u qaadan waa ayay ku noqotay markuu ogaaday in ilmaha loo qooneeyey yahay wiil yar oo shan jir ah oo caddaan ah.
”Waa markaan ogaaday in caruurtu cid daryeesha u baahantahay ee aanu midabku macno ii samaynayn aniga” ayuu yidhi Peter.
”Waxa gurigayga ka banaanaa laba makhsin oo dheeraad ah oo fursad aan cid hoy ku siiyo waan hayey. Sidii Masiko anigaba fursadda nololeed ii siiyey ayaan aniguna doonayey in aan caruur fursad u siiyo” ayuu intaa ku daray.
Arintan ay haysata Peter waa dhibaato jirta oo dad badan oo isaga la mid ahi ay la kulmaan. Waa aragti qaldan oo loo qabo in caruurtaas caddaanka ahay afduubanayaan.
Peter iyo odaygii u naxay ee qudhiisa soo koriyey Jacques Masiko
Laakiin sida uu tibaaxay Nicholas Zill oo ah cilmi baadhe cilmi nafsiga ah kana tirsan mac-hadka daraasaadka qoyska ee dalka Maraykanka, qoyskaska caddaanka ah ee Maraykanku way uga badan yihiin dhigooda madowga ah in ay korsadaan caruur aan isirkooda ahayn.
Xogtii ugu dambaysay ee soo baxday ilaa tan iyo 2016 waxay tibaaxaysaa in qoysaska Maraykanka madow ahi caruurta ay dayreelaan ee ay korsadaan 1% ay caruur caddaan ah yihiin.
Dhanka kale se qoysaska caddaanka ah ayaa caruurta ay daryeelaan ee korsadaan ay 11% ka yihiin caruur ay kala isir yihiin oo weliba 5% ay madow yihiin.
Peter wuxuu sheegay in ay u qorshaysantahay in marka xayiraadda socdaalka la qaado in uu doonayo inuu Johnny geeyo Uganda si uu u soo arko halka ninka soo korsaday ka soo jeedo, waa Peter qudhiisee.
Waxa kale oo uu doonayaa in xidhiidh fiican la yeesho waalidiintii dhashay Johnny si ay hadhow ugu fududaato in marka uu weynaado aanay xanuun noloshiisa ugu noqon in uu waalidkii dhalay mid aan ahayni soo koriyey.
Previous Baalmaanka Somaliya oo berito u codayn doona heshiski doorashoyinka ee Muqdisho
Next Maxaa u sabab ah in militariga Masar ka awood bataan kuwa Turkiga?